Momba anay - Ningbo Boyu Waterproof Material Co., Ltd.
Ningbo Boyu tantera-drano fitaovana Co., Ltd
Ningbo Boyu tantera-drano fitaovana Co., Ltd.A matihanina mpanamboatra izay fikarohana sy ny fampandrosoana, productionand varotra amin'ny orinasa iray.misy faritra indostrialy Chongshou ao Cixi Ningbo, miaraka amin'ny fidirana amin'ny fitaterana.
Ny tena vokatra polyurethane grouting foam, tantera-drano membrane, grouting tsindrona packers, grouting paompy, menaka nipples ary koa ny ampahany.Capacity 120.000.000 Pieces tsindrona packers, Ny vokatra rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ary tena ankasitrahana amin'ny tsena isan-karazany manerana izao tontolo izao.
Tsy tantera-drano tanteraka, ny kalitao no kolontsainay.serivisy serivisy OEM namboarina.Izahay dia mandray tsara ny fanontanianao momba ny fifandraisana ara-barotra maharitra, ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa, ny tombontsoa iombonana.
Mifantoka amin'ny famolavolana vokatra avo lenta ho an'ny tsena ambony indrindra izahay. Ny vokatray dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ary aondrana any Eoropa, Amerika, Japon ary toerana hafa manerana izao tontolo izao.
Manana ekipa R&D matanjaka izahay, ary afaka mamolavola sy mamokatra vokatra araka ny sary na santionany natolotry ny mpanjifa.
Manana orinasa manokana izahay.Noho izany dia afaka manolotra mivantana ny vidiny sy ny vokatra.
Manana tsipika famokarana ho an'ny packer tsindrona izahay, ary milina paompy tsindrona.koa ny ampahany.Foam polyurethane sy fitaovana fonon-drano tsy misy rano.
Ny fahafaha-mamokatra isan-taona dia mihoatra ny 80.000.000, pcs .afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa samihafa amin'ny habetsahan'ny fividianana samihafa.
Amin'ny ho avy, ny orinasa dia hanohy hanome lalao feno ho an'ny tombontsoany manokana, mifikitra hatrany amin'ny foto-kevitry ny "mitarika amin'ny siansa sy ny teknolojia, manompo ny tsena, mitondra ny olona amin'ny tsy fivadihana sy mikatsaka ny fahalavorariana" ary ny filozofian'ny orinasa "ny vokatra dia olona", manatanteraka tsy tapaka ny fanavaozana ara-teknolojia, ny fanavaozana ny fitaovana, ny fanavaozana ny serivisy sy ny fanavaozana ny fomba fitantanana, ary ny fampivoarana tsy tapaka ny vokatra mahomby kokoa mba hanomezana ny filan'ny fampandrosoana ho avy.Amin'ny alalan'ny zava-baovao mba hampivelatra tsy mitsaha-mitombo ny vidiny-mahomby vokatra mba hihaona amin'ny filan'ny fampandrosoana ho avy, ary haingana manome mpanjifa amin'ny avo-tsara, ambany vidiny vokatra no tsy mitsahatra mikatsaka ny tanjona.